Inicio/Tiknoolaji/Qalabka cabirka korontada (Ohmmeter, Ammeter, Voltmeter)
0 624 7 daqiiqo akhri
Qof kasta oo hiwaayad ah, arday koronto, elektaroonig ama wixii la xiriira, riyadu waa inay yeeshaan qalab ay wax ku cabiraan. Xaaladaha qaarkood, tababarteyaashu waxay bartaan qalab aad u liita oo tayo leh, halkii ay ka caawin lahaayeen inay wax bartaan, cilladaha sii adkeeyaan ama muujiyaan cabbiro been ah.
Xaaladaha kale, tababarteyaashu waxay helaan qalab tayo sare leh laakiin, iyaga oo aan lahayn khibrad, waxay sameeyaan isku xirnaan khaldan, taasoo keenta isku-dheelitirnaan ama cillad la'aan qalabka. Qoraalkan oo dhan waxaan ku tusi doonaa sida saxda ah ee loo adeegsado, loo adeegsado iyo sida loo hubiyo qalabaynta.
Jaantus 1 qalabka wax lagu cabiro (https://citeia.com)
Waa maxay aaladaha lagu cabiro korantada?
Si loo sameeyo daraasad ku saabsan calaamadaha korantada waa inaan cabirnaa oo, dabcan, diiwaangelinaa. Aad ayey muhiim ugu tahay qof kasta oo doonaya inuu falanqeeyo dhacdooyinkan inuu yeesho aalado lagu cabiro koronto oo lagu kalsoon yahay.
Cabbiraadaha waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu saleynayo xuduudaha korantada, iyadoo loo eegayo astaamahooda sida cadaadiska, socodka, xoogga ama heerkulka. Maqaalkan waxaan nafteena ugu hibeyn doonnaa barashada qalabka cabbiraadda ee xuduudaha aasaasiga ah ee ugu caansan sida:
Waa maxay Ohmmeter?
Waa qalab lagu cabbiro caabbinta korantada. Adeegsiga xiriirka inta udhaxeysa farqiga suurtagalka ah (Voltage) iyo xoogga korantada hadda (Amps) ee uu soo saaray sharciga Ohm.
By habka, laga yaabee inaad rabto inaad gadaal aragto Muxuu sheegayaa sharciga Ohm iyo sirtiisa?
Adeegso aaladda loo yaqaan 'galvanometer', oo ah mitirka korontada ku shaqeeya. Taasi waxay u shaqeysaa sida wareejiye, iyadoo ku heleysa korantada koronto joogto ah oo keeneysa isbeddelo tilmaame tilmaamaya cabirka xiriirka loo xisaabinayo Sharciga Ohm. (Eeg maqaalka sharciga Ohm). Daawo Jaantus 2
Jaantus 2 Analog Ohmmeter (https://citeia.com)
Xaaladdan oo kale ma isticmaashid galvanometerka, halkii aad ka isticmaali lahayd a xiriirka leh koronto-qaybiyaha (taas oo kuxiran miisaanka) iyo helitaanka calaamadda (Analog / digital) oo qaata qiimaha caabbinta Xiriirka sharciga ee Ohm. Fiiri sawirka 3
Jaantus 3 Digital ohmmeter (https://citeia.com)
Ohmmeterku wuxuu kuxiran yahay si is barbar socda culeyska (fiiri sawirka 4), waxaa lagugula talinayaa in caarada qalabka ay kujiraan xaalado wanaagsan (Tilmaamo ama talooyin wasakh ah ayaa sababa khalad cabirka). Waxaa muhiim ah in la ogaado in bixinta kala duwanaanshaha suurtagalka ah ay fuliso batteriga gudaha ee qalabka.
Jaantus 4 Xiriirka Ohmmeter (https://citeia.com)
Talaabooyinka lagu qaadayo cabir sax ah qalabka wax lagu cabiro ee korantada:
Waxaan kugula talineynaa inaad sameyso talaabooyinka soo socda si aad natiijooyin fiican uga hesho cabbirkaaga:
Kala-hagaajinta iyo baaritaanka leedhka:
Qalabka analogga ah waxay ahayd waajib in lagu sameeyo cabbir iyo hubinta tilmaamaha, laakiin qalabka dijitaalka ah ee aragti ahaan otomaatig ah, waxaa jira qodobo uu qalabkani awood u yeelan karo, halkii uu otomaatig ka dhigi lahaa (haddii wax walba aysan sax ahayn), ay soo saari karaan qalad ama qalad cabirka ah. Waxaan kugula talineynaa inaad sameyso mar kasta oo aan u baahanahay cabir, xaqiijin isku hagaajinta qalabka:
Tallaabadani waa mid aasaasi ah laakiin aasaasiga u ah helitaanka akhrinta oo ay ku yar tahay qaladka (waxaan kugula talineynaa inaad si joogto ah u sameyso), Waxay ka kooban yihiin oo keliya ku biirista talooyinka qalabka qasbaya cabirka +/- 0 Ω sida ku cad sawirka 5
Jaantus 5 Imtixaanka Ohmmeter wuxuu hogaamiyaa baaritaanka (https://citeia.com)
Waa in la xoojiyaa helitaanka natiijada tan 0 Ω cabiriddu waa fiican tahay, waa in la xusuusnaadaa in talooyinka wax lagu cabirayo ay adeegsadaan fiilooyin naxaas ah (aragti ahaan hagayaal aad u fiican) laakiin ficil ahaan dhammaan kiciyeyaasha waxay leeyihiin xoogaa iska caabin ah, sida talooyinka oo kale (badanaa waxay ka samaysan yihiin bir bir ah, kuwa xirfadleyda ahna waa naxaas qubeys qalin ah), si kastaba ha noqotee ma ayan qiil siinayn natiijo ka weyn 0.2 Ω +/- boqolkiiba (%) saxnaanta aqrinta qalabka.
Si loo siiyo qiime sare waxaan kugula talineynaa: nadiifi talooyinka, hubi cabirka qalabka iyo barta ugu muhiimsan, xaaladda batteriga qalabka.
Hubinta Qalabaynta Qalabka:
Tijaabadan waxaan kugula talineynaa inaad yeelato heer, tusaale ahaan, 100 Ω iska caabin leh dulqaad aan ka weyneyn +/- 1% si kale haddii loo dhigo:
R Max = 100 Ω + (100Ω x 0.01) = 101 Ω
R daqiiqo = 100 Ω - (100Ω x 0.01) = 99 Ω
Hadda haddii xilligan aynu ku darno qaladka aqrinta qalabka (waxay kuxirantahay astaanta iyo tayada Ohmmeterka), badanaa aaladda Fluke model 117 oo ah qalab dijitaal ah oo kujira cabirka baaxada gawaarida (0 - 6 M Ω) waa +/- 0.9% [ 2], markaa waxaan yeelan karnaa tallaabooyinka soo socda:
R Max = 101 Ω + (101Ω x 0.009) = 101,9 Ω
R daqiiqo = 99 Ω - (99Ω x 0.009) = 98,1 Ω
Dabcan, natiijadani waa mid xadidan, maaddaama xaaladaha deegaanka (dhibic aad muhiim ugu ah isku dheelitirka heerarka) iyo qaladka eber aan la tixgelin, laakiin iyadoo ay jiraan sababahaas oo dhan waa inaan ku yeelanno qiime ugu dhow heerka.
Haddii aadan isticmaalin aaladda gawaarida u kala goosha, waxaa lagugula talinayaa inaad dhigto aagga cabbirka ee ugu dhow heerka.
Jaantuska 6 waxaan aragnaa 2 mitirrood (waa qalab hal-ku-dhan ah) xaaladdan hargabka 117 waa mid iswada socda oo UNI-T UT38C waa in lagu xusho miisaanka ugu dhow qaabka. Tusaale ahaan, nooca multimeter-ka ah ee loo yaqaan 'UNI-T' UT-39c  ee jeeggan waxaa lagula talinayaa 200 Ω
Jaantus 6 Multimeter kala duwan Auto iyo Miisaanka Manual (https://citeia.com)
Taxaddarrada marka loo adeegsanayo cabbiraha 'Ohmmeter' sida aaladda qiyaasta korantada:
Isticmaalka saxda ah ee qalabkan cabbiraadda waxaan kugula talineynaa qodobbada soo socda:
Si aad ugu fuliso cabirrada cabbirka 'Ohmmeter' waa inaad ka go'daa qalabka korontada.
Maaddaama ay horeyba u ahayd mid faahfaahsan barta hore, imtixaanku wuxuu hoggaamiyaa hubinta iyo hubinta hubinta waa in lagu sameeyaa cabirka ka hor.
Si loo helo cabbiraad sax ah, waxaa lagugula talinayaa in laga gooyo ugu yaraan hal terminaal oo ka mid ah caabbinta ama qeybta, sidaasna looga fogaado carqalad kasta oo barbar socota.
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso: Awoodda Sharciga Watt
Waa maxay Ammitirku?
Ammeter-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro xoogga korantada korantada ee laanta ama noodhka wareegga korantada.
Ammeter analogga ah:
Ammeters-ku waxay leeyihiin iska caabin gudaha ah oo la yiraahdo shunt (RS), guud ahaan waxay ka hooseysaa 1 ohm saxnaan sare, waxay leedahay ujeedada yareynta xoogga korantada hadda ku jirta ee ku xiran isku xirka galvanometer. Fiiri sawirka 7aad.
Jaantus 7 Analog Ammeter (https://citeia.com)
Ammeter-ka dhijitaalka ah:
Sida ammeterka isbarbar socda, waxay isticmaashaa shunt iska caabin ah oo u dhiganta miisaanka, laakiin halkii laga isticmaali lahaa galvanometer, helitaanka calaamadda (analog / digital) ayaa la sameeyaa, waxay guud ahaan isticmaashaa miirayaasha hooseeya ee hoose si looga fogaado buuq.
Jaantus 8 Ammeter Dijital ah (https://citeia.com)
Tallaabooyinka lagu fulinayo cabbir sax ah oo leh mitirka mitirka oo ah aalad lagu cabiro koronto:
Ammeterku wuxuu kuxiran yahay taxane (oo leh boodbood) culeyska sida ku cad sawirka 9
Jaantus 9 Qiyaasta Ammeter (https://citeia.com)
Waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid isku xirnaanta isha korontada adoo ku dhejinaya ammeter-ka heerka ugu sarreeya iyo inaad hoos u dhigtid cabirka illaa laga gaarayo cabirka lagu taliyay.
Had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso xaalada Batariga iyo fiyuusyada kahor intaadan qaadin wax cabir ah.
Taxaddarrada marka loo adeegsanayo Cabbiraha cabirka korantada:
Waxaa muhiim ah in la xusuusnaado in Ammeterku ku xiran yahay iska caabbinta shuntada ee isbarbar dhiga si kale haddii loo dhigo caqabadda gudaha waxay u egtahay 0 Ω aragti ahaan (ficil ahaan waxay ku xirnaan doontaa miisaanka) laakiin guud ahaan way ka yar tahay 1 Ω marka waa inuusan waligiis ku xirmin PARALLEL.
Aad ayey muhiim u tahay in la hubiyo fiyuuska difaaca oo waligaa ha dhigin qiime ka sarreeya kan lagu taliyay.
Waa maxay Voltmeter-ku?
El Voltmeter Waa qalab loo isticmaalo in lagu cabbiro farqiga u dhexeeya labada dhibic ee wareegga korantada.
Waxay ka kooban tahay galvanometer leh iska caabin taxane ah oo qiimaheedu ku xirnaan doono miisaanka la xushay, eeg jaantuska 10
Jaantus 10 Analog Voltmeter (https://citeia.com)
Voltmeter-ka dhijitaalka ahi wuxuu leeyahay mabda 'la mid ah voltmeter-ka analogga ah, farqiga u dhexeeya ayaa ah in galvanometer-ka lagu beddelay iska caabin, samaynta wareegga kala-qaybiyaha danab ee xiriirka saamiga leh.
Jaantus 11 Voltmeter Dijital ah (https://citeia.com)
Voltmeters-ku wuxuu leeyahay caqabad sare xagga aragtida ah waxayna u muuqdaan kuwo aan xad lahayn ficil ahaan waxay leeyihiin celcelis ahaan 1M Ω (dabcan way ku kala duwan tahay hadba inta ay le'eg tahay), xiriirkooduna waa is barbar socdaa sida ku cad sawirka 12
Jaantus 12 Iskuxirka Voltmeter (https://citeia.com)
Talaabooyinka lagu fulinayo cabir sax ah Voltmeter-ka oo ah qalab lagu cabiro koronto:
A. Marwalba dul dhig Voltmeter-ka miisaanka ugu sarreeya (difaac ahaan) oo si tartiib tartiib ah hoos ugu sii dhig cabirka ugu dhow ee ka sarreeya cabirka.
B. Had iyo jeer hubi xaaladda batteriga qalabka (oo leh batteri sii daaya waxay soo saartaa khaladaadka cabirka).
C. Hubi kala-soocidda natiijooyinka baaritaanka, waxaa lagugula talinayaa inaad ixtiraamto midabka natiijooyinka baaritaanka (+ Casaan) (- Madoow).
D. Xaaladda diidmo, waxaa lagu talinayaa in lagu hagaajiyo (-) ama dhulka wareega oo lagu kala duwo hoggaanka baaritaanka (+).
E. Xaqiiji haddii cabbirka danab ee la doonayo uu yahay DC (Direct current) ama AC (Alternating current).
Taxaddarrada marka loo adeegsanayo Voltmeter-ka aaladda qiyaasta korantada:
Voltmeters guud ahaan waxay leeyihiin cabbir aad u sarreeya (600V - 1000V) had iyo jeer waxay bilaabaan inay wax ku akhriyaan miisaankan (AC / DC).
Waxaan xasuusnaano in cabirradu ay isbarbar socdaan (taxane ahaan wuxuu sababi lahaa wareeg furan) arag mawduuca sharciga ohm.
Talooyinka Ugu Dambeeya ee Qalabka Cabbiraadda Korantada
Qof kasta oo xagjir ah, arday ama farsamo yaqaan ah oo ku saabsan aaladaha korantada, korontada waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida loo isticmaalo aaladaha wax lagu cabiro, qalabkooda ayaa lagama maarmaan u ah fulinta baaritaanka iyo qiimeynta farsamada. Haddii aad isticmaasho mitir mitir u qaado sida caadiga ah jeegga cabbirka Ohmmeter-ka, maaddaama qalabkan (dhammaantood hal), dhammaan xuduudaha ayaa si uun isugu xiran tusaale ahaan (batteriga, talooyinka, qiyaasaha iyo voltmeter-ka ee cabbirka isbeddelada iska caabinta iyo kuwa kale)
Isticmaalka qaabka tijaabada ee qalabka cabbiraadda korontada Ohmmeter, Ammeter iyo Voltmeter ayaa lagama maarmaan u ah in si joogto ah loo sameeyo iyadoo ay ugu wacan tahay waayo-aragnimadeena oo aanan sameynin oo nasiib darro haysashada aaladda aan ka soo bixinaynin aaladda, waxay na siin kartaa calaamado been ah oo ku saabsan cilladaha ama akhriska khaladaadka.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan hordhaca ah ee mowduuca waxtar leh, waxaan sugeynaa faallooyinkaaga iyo shakigaaga.
ammeter waa maxay astaamaha qalabka cabbiraadda korantada sida loo isticmaalo qalabka cabbiraadda korantada sida loo isticmaalo ammeter sida loo isticmaalo ohmmeter sida loo isticmaalo voltmeter qalabka cabirka korontada qalabka lagu cabbiro baaxadda korantada qalabka qiyaasta korantada qalab lagu cabiro awooda korontada Muhiimadda qalabka cabbiraadda korantada qalabka cabirka korontada mishiinada lagu cabbiro korantada cabirka korontada walxaha cabirka korantada ohmmeter waa maxay waa maxay ammeterka waa maxay ohmmeterka waa maxay voltmeter-ka waa maxay ammeterka waa maxay ohmmeterka waa maxay voltmeter nidaamyada cabbirka korantada isticmaalka qalabka cabbiraadda korantada voltmeter waa maxay